राप्रपाको तमाशाः कमल थापा विरुद्ध पशुपतिशम्शेरको फायरिंग चुक्ला कि टिक्ला ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
राप्रपाको तमाशाः कमल थापा विरुद्ध पशुपतिशम्शेरको फायरिंग चुक्ला कि टिक्ला ?
गत फागुनमा बडो तामझामका साथ राजधानीमा एकता महाधिवेशन गरेर राप्रपा नेपाल र राप्रपा एकीकृत भए । पार्टी एकता महाधिवेशनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अधयक्ष केपी र काँग्रेस सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतले राप्रपालाई वैकल्पिक शक्ति बन्ने शुुभकामना दिए । एकतापछि राप्रपा मोटाएको प्रचार गरियो जब यसमा कलाकारदेखि गुण्डानाईकेसम्मको प्रवेश भयो । अभिनेत्री रेखा थापा, लोकगायिक कोमल वली र गुण्डा नाईके दिपक मनाँगेको राप्रपामा प्रवेशले राप्रपाको शक्ति बिस्तारको डंका पिटियो ।
राप्रपा नेपालका तत्कालिन सह अध्यक्ष केशरबहादुर विष्ट नेपाली राजनीतिमा नैतिक मूल्य र आर्दशलाई आत्मासात गर्ने थोरै नेतामध्येका एक हुन । उनले दोस्रो संविधान सभामा राप्रपा नेपालले संसदको चौथो ठूलो दल हुने गरी समानुपातिक तर्फ २४ साँसद सिट जितेपछिको एक प्रतिक्रियामा भनेका थिए, यो राप्रपा नेपाललाई उल्का परेको हो । प्रत्यक्षतर्फ शून्य सिट जितेको राप्रपा नेपालले मन्त्रीपरिषदबाट पनि एक जना मनोनित साँसद पायो । फलतः यो दल केही अघिसम्म वैकल्पिक शक्ति बन्ने राजनीतिक अडकलबाजी धेरै भयो । तर राप्रपा नेपाल राप्रपासंग गत फागुनमा एकिकृत भएरै उसले सामना गर्यो स्थानीय तह चुनाव २०७४ । पहिलो चरणको स्थानीय तहमा जम्मा एक सिट जितेको राप्रपाले दोस्रो चरणमा मुश्किलले ३ सिट जित्यो । स्थानीय उम्मेद्धवारको लोकप्रियताका कारण नेपालगन्ज, झापा र धादिंगमा गरी कुल ४ स्थानीय तह जितेको संसदको चौथो ठूलो दल स्थानीय तहको चुनावमा त उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम र विजय कुमार गच्छेदारको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम भन्दा पनि तल झरेको छ । पछिल्लो चुनावी परिणामले राप्रपाले दोस्रो संविधान सभामा पाएको समानुपातिक तर्फको मत उसलाई उल्का परेको उदाहरण नै सिद्ध भएको छ, नेता केशरबहादुर विष्टकै शव्दमा ।
हो, गत फागुनमा बडो तामझामका साथ राजधानीमा एकता महाधिवेशन गरेर राप्रपा नेपाल र राप्रपा एकीकृत भए । पार्टी एकता महाधिवेशनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अधयक्ष केपी र काँग्रेस सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतले राप्रपालाई वैकल्पिक शक्ति बन्ने शुुभकामना दिए । कमल थापाको राप्रपा नेपाल र पशुपति शम्शेर राणा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको राप्रपा वीचको एकता पूर्व पंचहरुको पुर्नमिलन मात्रै थिएन, यो दल काँग्रेस, एमाले र माओवादीका लागि सौता हुन सक्ने राजनीतिक पण्डितहरुको अडकलबाजी थियो । एकतापछि राप्रपा मोटाएको प्रचार गरियो जब यसमा कलाकारदेखि गुण्डानाईकेसम्मको प्रवेश भयो । अभिनेत्री रेखा थापा, लोकगायिक कोमल वली र गुण्डा नाईके दिपक मनाँगेको राप्रपामा प्रवेशले राप्रपाको शक्ति बिस्तारको डंका पिटियो ।
बिभाजनका लागि भएको एकताः
तर एकताको महिना नबित्दै फेरि राप्रपामा बिभाजनको रेखा कोरियो । पूर्वपंचहरुको दल फुट्नका लागि जुट्छ र जुटेपछि फेरि फुट्छ भन्ने आलोचकहरुको भनाई राप्रपाले गत चैतमा नै पुष्टि गरयो, जब यस पार्टीका विद्धान नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी एकता महाधिवशेनको महिनादिन नपुुग्दै पार्टीबाट अलग भए ।एकता महाधिवेशनको एक महिना नबित्दै तत्कालिन बरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी परित्याग गरेका थिए । वरिष्ठ नेता डा. लोहनीले पनि अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीलाई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाएका लगायतका दर्जनौं आरोप लगाएका थिए । पार्टीको चुनाव चिन्ह हलो नराखी गाई राखिएको लगायतका आरोपसहित राप्रपाबाट बाहिरिएका डा. लोहनीले पछि राप्रपा नेपालबाट त्यस अघि नै निकालिएका केशरबहादुर विष्टसंग मिलेर राप्रपा राष्टवादी नामक नयाँ दल बनाएका थिए । अहिले डा. लोहनी र विष्टको एकिकृत राष्टवादी राप्रपा गरिखाने दल बनिनसकेको भए पनि कमल थापाको राप्रपालाई हराउने र डुुबाउन सक्ने हैसियतमा उदाईरहेको छ भन्ने त स्थानीय तह चुनावको पराजयले नै सिद्ध गरेको छ ।
अहिले एकीकृत बनेको राप्रपा एकताको ठीक ५ महिनापछि र स्थानीय चुनावमा करारी हार व्यहोरेपछि पुनः फुटको डिलमा आईपुगेको छ उही राप्रपा । अध्यक्ष कमल थापाले ४२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे लगत्तै त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाउदै वरिष्ठ नेता पशुपति शम्शेर राणाले पार्टी फुटको सुरुवात अध्यक्ष थापाले नै सुरु गरेको आरोप लगाएका छन । संभवतः बहुमत पदाधिकारीद्धारा अब अधयक्ष थापालाई पदमुक्त गर्न नेता राणाले अन्तिम कोशिस गर्नेछन । उनले विजयवासमा संकलन गरिरहेको अधयक्ष थापा विरुद्धको हस्ताक्षर कमल थापालाई पदमुक्त गर्नका लागि नै हो । अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीलाई अध्यक्षको बित्र्ता बनाएर एकाँकी निर्णय गरेकोले पार्टीमा अनिष्ट र बिग्रहको स्थिति पैदा भएको वरिष्ठ नेता राणको आरोप छ । राणाले शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्तीमा अधयक्ष थापाले गरेका ४२ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन खारेज गर्न माग गरिएको छ । तर अध्यक्ष थापाले उल्टै मनोनित केन्द्रीय सदस्यको सूचि निर्वाचन आयोगमा बुझाएर आफ्नो निर्णय फित्र्ता नहुने जवाफी कदम चालेका छन । उता राणाले पार्टीमा बिभाजन आए त्यसको जिम्मा अध्यक्ष थापाले नै लिनुपर्ने चेतावनी समेत फमाईसकेका छन ।
अध्यक्ष थापा विरुद्ध वरिष्ठ नेता राणाका फायरिंगः
असार २९ गते ४२ जना केन्द्रीय सदस्य अध्यक्ष कमल थापाद्धारा मनोनित गरेको २४ घण्टा नबित्दै असार ३० गते वरिष्ठ नेता पशुपति शम्शेर राणाद्धारा अध्यक्ष थापाले मनोमानानी र एकाँकी ढंगमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको भन्दै चर्को विरोध गरेर विज्ञप्ती जारी गरे । राणाद्धारा सो मनोनयन आफूलाई मान्य नभएको भन्दै फित्र्ता लिन माग गरे । तर अध्यक्ष थापाद्धारा असार ३० मा नै ४२ मनोनित केन्द्रीय सदस्यको नाम निर्वाचन आयोगमा पेश गरियो । आफ्नो मनोनयनको बचाऊ गर्दै अध्यक्ष थापाले पार्टीद्धारा असार ३० मा काठमाण्डौंमा आयोजित पार्टीको उपत्यकास्तरीय कार्यकत्र्ता भेलामा अध्यक्ष थापाले पार्टीको निर्णय संतुलित रहेको र त्यसलाई सबैले मान्नुपर्नेमा जोड दिए । बिडम्बना ते भेला पूर्व राप्रपा नेपाल समूहका टंक ढकाल, विश्वबन्धु थापा, राजाराम श्रेष्ठ लगायतका नेता मात्रै ससहभागि भए । वरिष्ठ नेता राणा पक्षद्धारा उपत्यका भेला बहिष्कार गरियो अनि विजयवासमा समानान्तर भेला सम्पन्न गरेर अध्यक्ष कमल थापा विरुद्ध नै हस्ताक्षर संकलन तिव्र बनाईयो । पूर्व राप्रपा समुहका सुनिल बहादुर थापा, दिपक बोहरा, लगायत राण खेमाका नेता भेलामा सहभागि भएन्न ।
पशुपतिको विज्ञप्तीमा थापा विरुद्धका आरोपहरुः
– केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दा अधयक्ष कमल थापाले पार्टीलाई अध्यक्षको एकल बित्र्ताका रुपमा रुपान्तरण गरेको ।
– तत्कालिन राप्रपा र राप्रपा नेपाल मिलेर राप्रपा बनेको तथ्य बिर्सेको ।
– केन्द्रीय समिति र कार्य सम्पादन समितिको अस्तित्व र उपस्थितिलाई अध्यक्ष थापाले पूर्ण रुपमा नकारेको ।
– अध्यक्षले मनोनयनबारे केन्द्रीय नेता गणलाई सुईकोसम्म नदिई अप्रत्याशित केन्द्रीय समिति बिस्तार गरेको ।
– अधयक्षले मनोगत एकल निर्णय गरेको ।
– अध्यक्ष एकलैको एकाँकी निर्णयले मधेश, महिला, आदिवासी जनजाती, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, दुर्गम क्षेत्र र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगरेको ।
– केन्द्रीय समितिको बिस्तार वा अन्य महत्वपूर्ण निर्णयमा केन्द्रीय तहका सबै नेता गणको परामर्श र सहमति नलिइएको ।
– मनोनयनमा सकै पक्षको सन्तुलित नगराइएको तथा सबैको भावना र चाहनाको प्रतिनिध्त्वि नगरिएको ।
– एकाँकी मनोनयनका कारण पार्टीमा अनिष्ट र बिग्रहको स्थिति पैदा गरेको ।
– पार्टीमा उत्पन्न अनिष्ट र बिग्रहको स्थितिबाट आफू चिन्तित रहेको ।
– साउन ४ मा बस्न लागेको केन्द्रीय समिति वैठकको उपेक्षा गरिएको ।
के हो बिबादको चुरो ?
पार्टी अध्यक्ष थापा र वरिष्ठ नेता राणा वीच चुनाव चिन्ह हलो राख्ने की गाई भन्ने एकताको बेला देखिको बिबाद हाल केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा सतहमा छताछुल्ल भएको छ । आवरणमा ४२ केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको मुद्धामा राण भर्सेज थापाको यो पार्टी बिबाद बाहिर आए पनि खासमा यो पशुपति शम्शेर राणा र कमल थापाको व्यक्तित्व टकरावको मनोयुद्ध पनि हो । थापा सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिएपछि राणा आफु सर्वमान्य नेताका रुपमा पार्टी अध्यक्ष थापाद्धारा पुजिन चाहन्थे । तर सत्तामुखी र अवसरवादी चरित्रका कमल थापाले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी पार्टीमा आफुखुसी निर्णय लिन थाले । आफू राप्रपाको सेरेमोनियल नेतामा सीमित हुनुको पीडालाई वरिष्ठ नेता राणाले ४२ केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको बाहानामा थापा विरुद्ध जाई लागेका छन । एकता लगत्तै वैकल्पिक शक्ति बन्ने उदघोषका साथ स्थानीय चुनावमा गएको राप्रपा भने अनपेक्षित हार खान बिवश भयो । देशभर मुश्किलले शून्य जितको खतराबाट जोगिएको राप्रपामा वरिष्ठ नेता पशुपति शम्शेरले राणाले नै पार्टीलाई अध्यक्ष थापाले अध्यक्षको बित्र्ता बनाएको संगीन आरोप सहित त्यो बेला आक्रमण गरेका छन, जतिबेला कमल थापा विरुद्ध आन्तरिक र वाह्य आलोचना तिव्र बनेको छ । तत्कालिन राप्रपाका अध्यक्ष राणा एकीकृत दलमा अध्यक्ष नै नभएपनि अत्यन्त प्रभावशाली नेता भएको उदाहरण उनले थापा विरुद्ध बलियो रुपमा चुनौतिका साथ दिएका छन ।
राप्रपा फुट्ला की थापा निकालिएलान ?
यथास्थितिमा अब सग्लो राप्रपा रहने संकेत छैन नै । थापा र राणा नै आमने सामने भैसकेपछि उनीहरुका समर्थकहरु गुटगत आलोचना र प्रतिरक्षामा सामाजिक संजालदेखि राजनीतिक मन्चसम्म उत्रिसकेका छन ।तर उनीहरुमा लामो बिभाजनको तीतो पीडाको गहिरो अनुुभव पनि उत्तिकै छ । त्यसैले सके कमल थापालाई अध्यक्षबाट हटाउने, नभए पुरै साईजमा राख्ने गरी राणा समुहले शक्ति देखाउदै छ ।
हाल केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको बिबादको स्वरुपमा बाहिर आएको अध्यक्ष थापा र नेता राणको यो बिबाद सरकारमा सहभागिताका बिषयमा पनि थप बल्झिने स्पष्टै छ । पारिवारिक र राजनीतिक रुपमा पनि पशुपति शम्शेर राणा र प्रधानमन्त्री देउवा निकट संवन्धमा रहेका कारण वरिष्ठ नेता राणाले अध्यक्ष थापा भन्दा प्रभावकारी र विश्वासिलो संवन्ध वर्तमान सरकार प्रमुख र सत्तागठबन्धनसंग बनाएका छन । अध्यक्ष थापा उपप्रधानमन्त्रीमा आफै दोहोरिएर सरकारमा सामेल हुन चाहिरहेका छन । तर वरिष्ठ नेता राणा मन्त्रीहरु मात्रै सरकारमा पठाउने योजनामा छन । र, सरकारमा सहभागिताले पार्टीमा थप दर्रार पैदा गर्दैछ ।
राप्रपाको किचलो, संसोधनमा धक्का ?
रेशम लामा, विराज विष्ट वा बबिना मोक्तान लगायतका दर्जन बाराबर साँसद कमल थापाका लागि भालुका कन्पट बनिरहेका छन । पछिल्ला सबै संसदीय दल वैठकहरु ती समुहले बष्हिकार गर्दै आएका छन । उनीहरु संविधान संसोधनको मुद्धामा मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेतिर मिल्दै गएका छन । त्यसैले राप्रपामा देखिएको यो बिबाद उनीहरुको आन्तरिक पार्टी जीवनमा नयाँ क्षती त हुने नै छ, त्यसको सिधा असर संविधान संसोधनको सरकारी प्रयाशमा पनि पर्ने देखिदैछ । राप्रपासंग हाल ३७ साँसद छन, जो यथास्थितिमा संसविधान संसोधन गर्ने र नगर्ने फरक फरक कित्तामा विभक्त छन ।
गत वैशाख १७ गते पार्टी निर्देशन बिपरित दर्जन साँसद संविधान संसोधनको पक्षमा भोट हाल्न संसद वैठकमा उपस्थित नभएपछि राप्रपा अध्यक्ष थापामाथिको पार्टी भित्रैको अविश्वास बाहिर आएको थियो । हाल पनि थापा विरोधी साँसदहरु संसोधनका पक्षमा भोट नहाल्ने भन्दै असंतुष्ट बनिरहदा चाहेर पनि अध्यक्ष थापा वर्तमान सरकारमा सहभागि हुन पाईरहेका छैन्न । संविधान संसोधनको विपक्षमा रहेका साँसदहरु मात्रै होईन, नेता राणा नै खुल्लमखुल्ला अध्यक्ष विरुद्ध संर्घषमा उत्रिएकाले राप्रपामा कमल थापा अरु दबाबमा छन ।
अब कमल थापाले राणासंग झुुकेर वा राणाको रबरस्टाम्प अध्यक्ष भएर काम गर्नेगरी एक कदम पछाडि र दूूईकदम अघि हुने चलाखी गरे भने सिंगो पार्टीको अध्यक्ष अरु केही समयका लागि हुन सक्लान । अन्यथा उनले पार्टीको एकिकृत अध्यक्ष हुने मौकामा कालो बादल लागिसकेको छ । अर्को कुरा डा . लोहनी पक्षले पुरानो राप्रपाको हलो चुनाव चिन्हमा आफूले दाबी पेश गरिसकेको छ । उसले निर्वाचन आयोगमा नै यो दाबी पेश गरेकाले फुट्ने खेमाको राप्रपालाई अब हलो चुनावचिन्हले भलो गर्ने संभावना पनि कम छ । लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा जयन्त चन्द बाहेक पुरानो राप्रपाका नेता प्रायः थापा पक्षमा छैन्न ।
उता राणा पक्षमा दपिक बोहरा लगायतका राजनीतिका सबै हर्कत गर्नसक्ने चलाख पंच खेलाडीहरु धेरै छन ।त्यसैले कमल थापालाई भावि दिन आन्तरिक र वाहय रुपमा नै प्रतिकुल हुदै गएका छन । आम जनताका लागि भने राप्रपाको यो किचलो कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात मात्रै हो । किन भने सत्ताका लागि जुनसुकै मूलय चुकाउन पछि नपर्ने यो दल अवसरवादको पर्याय मात्रै होईन, देशको राजनीतिक अस्थिरताको एक केन्द्रीय खलपात्र पनि हो । कमल थापा विरुद्ध फायर खोलेर राणाले हाने संभावना कम छ । राणा हारे नी जितेनी उनले थापाको ढलीमलीमा लगाउने अंकुश वा व्रेकले अब सिंगो राप्रपा रहने संभावना समाप्ती उन्मुख नै छ ।